सनराइजलाई मर्जरमा जानपर्ने आवश्यकता छैन «
सनराइजलाई मर्जरमा जानपर्ने आवश्यकता छैन
प्रकाशित मिति : श्रावण २७, २०७६ सोमबार
सनराइज बैंकलाई फरक बनाएर चिनाउने योजनामा रहेका जनक शर्मा पौड्यालले केही साताअघि मात्र बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यसभन्दा अघि ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी भइसकेका पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित करिब ३२ वर्ष बिताइसकेका छन् । नबिल बैंकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका पौड्यालसँग तत्कालीन एनआईसी बैंक स्थापना कालदेखि काम गरेको अनुभव छ । त्यसो त पौड्यालसँग लक्ष्मी बैंक स्थापनाको अनुभव पनि छ । नबिल बैंकमा मात्रै करिब ११ वर्ष बिताएका पौड्यालले ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि करिब १२ वर्ष बिताइसकेका छन् । बेलायतबाट एक्सलेरेटेड प्रोग्रामअन्तर्गत व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र बैंकिङ क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा धेरै बिताएका पौड्यालले सनराइज बैंकलाई नेपाली माटोसँग चिरपरिचित बनाउने योजना रहेको बताउँछन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले पनि कृषिका लागि लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सनराइज बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा धेरै कुल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा पनि कृषक खोज्दै हिँडेको बताउँछन् । सनराइज बैंकले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गरेको बताउने पौड्याल क्रमिक रूपमा यो वर्ष ४ र अर्को वर्ष ५ प्रतिशत पु-याउने योजनामा रहेको बताउँछन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको उनको विश्लेषण छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकम तथा उच्च ब्याजदरको समस्या देखिए भनेको सुनिए पनि समस्या ब्याजदरका नभएको उनको तर्क छ । बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमताअनुसारको लगानी विस्तार गर्नका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने बताउने पौड्यालसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समयमा सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद आएको थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
सनराइज बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा धेरै बलियो हार्मोनी देखिन्छ । बैंक आफैमा सबल संस्थाको रूपमा परिचित छ । सनराइज बैंकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकमा हुनुपर्ने पूर्वाधार सुरुवात भइसकेको छ । यसका आधारमा आगामी दिन सनराइज बैंक अझै उत्कृष्ट बैंक बन्नेमा शंका छैन । बैंकको संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि धेरै उत्कृष्ट रहेको मैले पाएँ । त्यसका साथै बैंकले नीति नियमको पालनामा पनि पूर्णरूपमा पालना गर्दै आएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सनराइज बैंक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंक भन्न लायक छ ।
विगतका कुरामा जान त्यति उपयुक्त नहोला । त्यसका साथै म यो संस्थासँग नजोडिएको समयमा भएको हुनाले धेरै जानकारी पनि मलाई छैन । पछिल्लो समयमा मसँग बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्ने सन्दर्भमा कुरा भयो । त्यो समयमा मेरो अन्य बैंकमा जाने सन्दर्भमा पनि कुरा भइराखेको थियो । तर, कतै पनि निश्चित भएको थिएन । कुरा हुँदै जाँदा दुवै पक्षको सहमति भएपछि मैले बैंकको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । राम्रो संस्थागत सुशासनको अभ्यासको सन्दर्भमा यो बैंक उत्कृष्ट लागेको छ । केही समयअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको विषयलाई लिएर बाहिर आएको सन्देशको कुरामा जे भयो त्यो त्यति राम्रो त होइन । त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैलाई आधार बनाएर बैंकलाई हेर्न पटक्कै मिल्दैन । सञ्चालक समितिको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा अफ्ठ्यारो मलाई महसुस भएको छैन । नेपाललगायत बेलायतमा मैलै जति पनि बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा सिकेका नयाँ कुरालाई आफ्नो ढंगले कार्यान्वयन गरेर बैंकलाई अझै व्यावसायिक र सबल बनाएर अघि बढाउने मौका मिलेको छ । त्यसमा म पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छु ।
चालू आवका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति आउँदा उत्साहित भएका बैंकहरू नीतिसँग सम्बन्धित निर्देशन आएपछि निरास भएको देखिन्छ । निरास नै हुनुपर्ने कारण के हो ?
अधिक उत्साह र निरासको विन्दुमा त पुगेकै भन्ने होइन होला । तर पनि, मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकहरूको मर्जरको विषयलाई लिएर अघि बढ्ने ठोष विषयवस्तु आउँछन् भन्ने कौतुहलता थियो । मौद्रिक नीतिले पुराना कुरालाई यथावत राख्दै केही निश्चित कुरामा नयाँ आयाम थपेर आएको छ । मौद्रिक नीतिको स्वागतयोग्य कुरा के छ भने विगत तीन वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या झेल्दै आएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि विदेशी मुद्रामा ल्याउन सकिने कर्जाको दायरा फराकिलो बनाएको छ भने विदेशी नागरिकले समेत मुद्दति निक्षेप खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने मात्र नभई बैंकको निक्षेप बढ्ने तथा निक्षेपको शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्यालाई सहज बनाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेर निक्षेप बढ्नु छुट्टै कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउने विषयलाई थप सरल बनाएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कमर्सियल बरोइङ सम्भव, सरल र सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन अवस्थामा गिर्दो छ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले पनि देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई आयात गर्नबाट पूर्णरूपमा बन्देज लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । आजभन्दा तीन दशकअघि नेपालबाट धेरै कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, दाल, धान, चामललगायतका वस्तु निर्यात हुने गथ्र्याे । मैले यी हरेक वस्तुका निर्यात एलसीहरूको डकुमेन्टेसनको काम गरेको थिएँ । त्यो समयमा करिब ४० प्रतिशत निर्यात थियो । अहिले ९५ प्रतिशत आयात र मुस्किलले ५ प्रतिशत निर्यात छ । त्यतिबेला निर्यात विभाग ठूलो हुने गथ्र्यो । अहिले बैंकहरूमा निर्यात विभागमा काम नै छैन । निर्यात एलसी देखेर सुझाव दिने, मोलमोलाइ गर्ने तथा निश्चित गर्ने विषयमा तालिम दिनका लागि कति ठाउँमा स्याम्पल नभएको अवस्था छ । यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । हामीले निर्यात बढाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति गरी विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई दिइने विदेशी मुद्रामा कुनै सीमा लगाउन नपरोस् भन्ने योजनासहित कायम गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि रेमिट्यान्सलाई पूर्णरूपमा औपचारिक माध्यमबाट आउने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले रोजगारका क्रममा विदेश गएका नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणित भौचर हेरेरमात्र भिसा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा हुण्डीको कारोबार रोकिन जान्छ । यसले रेमिट्यान्स पूर्णरूपमा बैंकिङ च्यानलमा आउने वातावरण बन्छ । त्यसका साथै बचतसमेत बढ्न गई रेमिट्यान्सलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा अनौपचारिक ठूलो छ भनिन्छ । त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याउन सकेको खण्डमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको अभाव हुने समस्या समाधान हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कहिले तरलता समस्या भनिन्छ त कहिले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव भयो भन्ने सुनिन्छ । त्यसका साथै ब्याजदरमा पनि अस्वाभाविक उतारचढावको गुनासा पनि उत्तिकै आउने गरेका छन् । यो क्षेत्रको समस्या चाँहि के हो ?
मैले हेर्दा हाम्रो समस्या ब्याजदर हुँदै होइन । ब्याजदरको सन्दर्भमा कति ठीक हो र होइन भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । हामीले सन १९९० पछि उदार अर्थतन्त्रको हिसाबले चलेका छौं भने ब्याजदर भनेको बजारका तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो । बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदरमा पनि कतिपय समयमा जटिलता आएर बैंकर्स एसोसिएसनले अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चालेको अवस्था पनि हो । त्यसैले पनि ब्याजदरको समस्या होइन भन्नेमा म स्पष्ट छु । त्यसो त आजभन्दा ३० वर्षअघि सामान्य टीआरको कर्जा १८ प्रतिशत थियो । आर्थिक उदारीकरणपछि बैंकहरूको संख्या वृद्धि भयो । त्यसले व्यापारी उद्योगीलाई नै फाइदा भएको छ । १८ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरेका उद्योगी ब्यापारीले अहिले दोहोरो अंकको तल्लो विन्दुमा कर्जा पाएको अवस्था छ । त्यसैगरी बैंकले लिने शुल्कमा पनि त्यस्तै घटेको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको प्रतिस्पर्धा हो । तर, अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदै गर्दा बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । बैंकले सेवा प्रदान गर्दै गर्दा लगानी पनि गरेको हुन्छ । त्यसैले उपयुक्त सेवा शुल्क लिनु पनि पर्छ । बैंकिङ भनेको नाफा कमाउनै पर्ने ब्यवसाय हो । बैंकहरू नाफामा चल्छन् डुब्दैनन्, विश्वासी हुन्छन्, घोटला हुँदैन भनेर नै सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने आधार बनेको हो ।
त्यसैले यो क्षेत्रको समस्या भनेको कर्जा लगानीयोग्य रकमको हो । नेपाल क्रेडिट क्रन्चमा जकडिएको छ । बैंकमा पर्याप्त निक्षेपका स्रोत छैनन् । आजको मितिमा बैंकहरूले ८ देखि १० खर्बको लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात कायम राखेर लगानीका लागि चाहिने पुँजीको स्रोत छैन । निक्षेप बढ्नका लागि सर्वसाधारणको बचतको बानी विकास हुनु प-यो, बजेटको आकार ठूलो, मनि सप्लाइ बढ्नु, अनौपचारिक रूपमा आएको विप्रेषण औपचारिक हुनु प-यो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नहुनु, निर्यातको प्रवद्र्धन तथा विदेशी ऋणमा सहजीकरण गरेको खण्डमा निक्षेपको स्रोत बढ्ने हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रामा विदेशी संस्थाबाट कर्जा ल्याउने विषयलाई सहज बनाएको अवस्था छ । त्यसैगरी बण्ड मार्केट विकास गर्न सकेको खण्डमा पनि निक्षेपको स्रोत बढ्न सक्छ ।
जुन हिसाबले २ वर्षको अवधिमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि भयो । त्यसको लगानी गर्ने सक्ने क्षमता विस्तारलाई भेटाउनका लागि निक्षेपका स्रोतको वृद्धि पनि सोही तुलनामा हुनु प-यो । जुन सम्भव छैन । त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ ।
बैंकहरूको लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा भएको वृद्धिअनुसार लगानी गर्न नपाउँदै गर्दा वा बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दैमा संकटमा नै जाने भन्ने त हुँदैन होला नि ?
संकटमै जाने स्थिति त बन्दैन । भोलिको कुरा भन्न सकिने विषय पनि भएन । तर, आयात यस्तै गरी बढ्ने हो भने ठूलो समस्या धेरै टाढा छैन । अर्थतन्त्रमा डच डिजिज भन्ने छ । सन १९७२ तिर हल्यान्डमा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण चिज आयात हुन थाल्यो । विदेशी राष्ट्रहरूसँग विदेशी मुद्रा ऋण लिएर आयातका लागि खर्चनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
अहिले देखिएको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अवस्थाले डरलाग्दो संकेत त गर्दैन । विगतका तुलनामा बढ्नु राम्रो संकेत होइन । त्यसका लागि देशमा उत्पादन बढाउन सरकार नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपालका कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर हस्तक्षेप गरेर नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने अधिकांश कृषि उपज पनि आयात गर्ने गरेका छौं । युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा निर्भर भएर हुँदैन । नेपालमै उत्पादन वृद्धि गरेको खण्डमा रोजगार पनि सिर्जना हुने हुँदा विदेशिन पर्ने बाध्यता नै हुँदैन । कुनै पनि जग्गा खाली नराखी उत्पादन गरेको खण्डमा कृषि उपज त आयात गर्नु पर्र्दैन । सरकारले बैंकहरूलाई कृषि कर्जा देऊ भनेरमात्र हुँदैन । सनराइज बैंकको कुरा गर्ने हो भने मैले हरेक शाखामा कृषक खोज्दै हिँड भनेर भनेको छु । हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत भनेर बस्दैनौ । आजको मितिमा सनराइज बैंकको कृषि कर्जा कुल कर्जाको करिब १२ प्रतिशत छ । सनराइज बैंक यसैमा रोकिँदैन । यो वर्षमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना छ । किसानको देशमा किसानलाई लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले राज्य लागेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न सक्छ ।
बैंकहरूको लगानी विस्तार गर्ने क्षमता पनि छ । सोही अनुसार कर्जाको माग पनि आएको छ । तर, बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गरेर ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । चालू आवको पहिलो महिना भएकाले हुनसक्छ अहिले समग्र बैंकिङ प्रणालीको औसत सीसीडी अनुपात करिब ७५ रहेको छ । सनराइज बैंकको कुरा गर्दा अहिले सीसीडी अनुपात ७६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट अब बैंकले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने भनेको २ प्रतिशत हो । यो भनेको सनराइज बैंकले आजको अवस्था ५ देखि ७ अर्बमात्र लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । आगामी दिनमा विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप सबैले प्रयास गरेका छन् । आगामी दिनमा विदेशी ऋण बैंकहरूले ल्याएको खण्डमा यो समस्या सहज होला । विदेशी मुद्राको ऋण पनि सहज छैन । नेपाल उच्च कर्जा जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विदेशी मुद्राको कर्जाको लागत नै महंगो हुन्छ । त्यसलाई ल्याएपछि हेजिङ प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । त्यसैले यो पनि भनेजस्तो सहज त छैन ।
विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउँदा पनि लिबोर प्लस ४ प्रतिशत थप गरेसम्म ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त ब्याजदर झनै बढाउने भयो नि ?
ब्यवसायी तथा उद्यमीहरूले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भनिरहेको अवस्था छ । त्यो होइन । विदेशबाट ल्याउने पैसाको लगानी नै धेरै पर्ने भएकाले हालको बजारको ब्याजदरभन्दा बढी हुनसक्छ । औसत लिबोर प्लस ४ गर्दा ७ प्रतिशत कर्जाको लागि नै पर्न आउँछ । त्यसका साथै विदेशी मुद्रामा हुनसक्ने उतारचढावको जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने हेजिङका लागि ४ प्रतिशत राख्दामात्र पनि ११ प्रतिशत हुन्छ । अहिले १० देखि ११ प्रतिशतको कर्जा धेरै भयो भनेका उद्योगी ब्यवसायीले विदेशी मुद्राको कर्जाका लागि तिर्नु पर्ने ब्याजदर त झनै धेरै हुने अवस्था छ । त्यसका लागि राज्यले कन्ट्री रिस्क मिनिमाइज गर्ने संयन्त्र के के हुन्, त्यसमा काम गरेको खण्डमा सस्तो हुनसक्छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएको छ । त्यसका साथै एक साताअघि मात्र निर्देशन स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकरहरूले संस्था सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भनिरहेको अवस्थामा तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
बैंकर भनेपछि म पनि त्यसमा परें होला । केन्द्रीय बैंकले ल्याएका निर्देशनहरू दीर्घकालीन स्थायित्व राख्ने विषयबाट अभिप्रेरित हुन्छन् । बजारको कुनै एउटा खेलाडीले हेर्दा एक संस्थामात्र हेर्छ । तर, नियामकले समग्र प्रणाली हेरेर नीति नियम बनाएको हुन्छ । बैंकहरू प्यानिक नै हुनुपर्ने अवस्था नहोला । तर, स्प्रेड घटेपछि आम्दानी घट्ने त स्वाभाविक नै हो । केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थायित्व तथा ब्याजदर स्थायित्वका लागि विभिन्न औजार ल्याएर बजारलाई नियमन गर्ने हो ।
केन्द्रीय बैंकलाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार सनराइज बैंकको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले केन्द्रीय बैंकलाई गरेको प्रतिबद्धतामा यो संस्थासँग भनेर उल्लेख गरेका छैनौ । मर्जरमा जाने नजाने आवश्यकता के हो ? आवश्यकता हेर्ने हो भने सनराइज बैंकलाई मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन । मर्जर नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक हिसाबले हुने कुरा बेग्लै हो । तर, त्यस्तो नहोला । हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पार्टनर छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने केही पनि गरेका छैनौ । तर, राम्रो संस्थागत सुशासन भएको सबल र उपयुक्त संस्था आएको खण्डमा मर्जरमा जाने विषयमा खुला नै छौं ।
भर्खरैमात्र सनराइज बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । बैंकलाई अघि बढाउने के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुने खालको वृद्धि गराउँदै अघि लैजाने योजना हो । मैले बैंकका आधारभूत पक्षलाई बलियो बनाई बैंकिङ प्रणालीमा सानातिना समस्याले असर नगर्ने गरी काम गर्ने योजनामा छु । बैंकको कर्पोरेट गर्भनेन्स धेरै राम्रो छ । यसलाई जेरो टलरेन्सको हिसाबले अघि बढ्छौ । बैंकलाई अन्यभन्दा छुट्टै किसिमको चिनारी लिएर अघि बढ्ने सोचमा छु । जस्तो कृषि क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएर पनि हुनसक्छ । बैंकको पोर्टफोलियो जति धेरै रिटेल भयो त्यति नै दिगो र नाफामुखी हुने भएकाले पनि रिटेल कृषि कर्जा नियमित रूपमा वृद्धि गर्दै जाने योजना छ । त्यसैगरी बैंकको शाखा सञ्जालमा वृद्धि गर्ने योजना छ । यो वर्षमा मात्र बैंकका करिब २५ वटा शाखा विस्तार र ब्रान्चलेस बैंकिङ १०० थप्ने योजना छ । बैंकलाई राम्रो बनाउनका लागि कर्मचारीको गुणस्तरमा पनि राम्रो हुनुपर्छ । योग्य र क्षमतावान कर्मचारी भएमा ग्राहकले पनि प्रभावकारी सेवा पाउन सक्छन् । कर्पोरेट ग्राहकभन्दा पनि एसएमई, रिटेल, कन्जुमर लोन प्रडक्टहरू ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुने योजना छ ।
जनक शर्मा पौड्याल
जलाशययुक्त आयोजनाबिना ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं
पम्फा भुषालमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयनेकपा माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसाल अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा
बजारमा ‘खुकुरी रमको’ एकाधिकार कायम छ
सुभास लामिछाने, महाप्रबन्धक, द नेपाल डिस्टीलरिज६२ वर्ष पूरा भएको नेपाली ब्रान्ड ‘खुकुरी रम’ नेपालमा मात्र
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अर्थतन्त्रमा अलमल
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको
बन्दाबन्दी होइन, स्वास्थ्य सावधानी बढाऔं
कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको विश्व अहिले फेरि नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमणले प्रभावित भएको छ ।